အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေးကြေငြာချက်.။
Utf-8''Instruction of NLD to Form CC_Jan10
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, January 30, 2010 Links to this post
ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ်ဖြင့် ပူတာအိုထောင်တွင် ကျခံနေရသည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ကိုအောင်သူသည် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ဖြစ်နေသဖြင့် မကြာသေးခင်က ECG (နှလုံးခုန်နှုန်းကို စမ်းသပ်သည့်ကိရိယာ) စစ်ဆေးကြည့်ရာအစက်အပြောက်၃ခုထက်မနည်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ ကျန်းမာရေးတော်တော် ဆိုးရွားစွာ ခံစားနေရသဖြင့် ဇနီးသည်ဖြစ်သူ မမြတ်မြတ်ထွန်းက အလွန်စိတ်ပူကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ပူတာအိုထောင်ထဲတွင်ရှိနေသော နိုင်င်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ ကျန်းမာရေးကိုလည်း သေသေချာဂရုတစိုက်
ကြည်ရှု့ စောင့်ရှောက်ခြင်း မရှိကြောင်းကိုလည်း ပူတာအိုထောင်တွင် ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့နေရသောမိသားစုဝင်များက ထပ်မံပြောကြားပါသည်.။
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသာတဦးဖြစ်သော ကိုအောင်သူသည် ၂၀၀၉ခုနှစ်ကလည်း အလွန်ရာသီဥတုဆိုးဝါးသော ပူတာအိုထောင်တွင် အေးလွန်းသည့် ရာသီဥတုဒဏ်ကို မခံနိုင်သဖြင့် ခြေထောက်တဘက်မှာ အကြောအားနည်းလျှက် တဖြေးဖြေး သေးငယ်လာပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသည်.။
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတဦးဖြစ်သော ကိုအောင်သူနှင့်တကွ ပူတာအိုထောင်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား(၁၅)ဦးခန့်ရှိရာ တချို့မှာ အလွန်ကျန်းမာရေး ဆိုးရွားနေကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်. နယ်စွန် နယ်ဖျားထောင်များသို့ ပို့ဆောင်ထားပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာလည်း လုံးဝမရှိကြောင်းနှင့် ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့လျှင် လိုအပ်သောဆေးဝါးများအား ကိုယ့်မိသားစုမှလုံလောက်စွာ ဝယ်ယူသွားရ ကြောင်းလည်း သိရပါသည်.။
၂ဝဝ၇ ခု နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်ရှိ မြရိပ်ညိုဟိုတယ်ရှေ့၌ စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေးပိုစတာ ချိတ်ဆွဲမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ်ဖြင့် ပူတာအိုထောင်တွင် ပြစ်ဒဏ်ကျနေရသည့် ကိုဘိုဘိုဝင်းလှိုင်သည် လည်းပြီးခဲ့သည့်လအတွင်းက လိပ်ခေါင်းရောဂါကို ခွဲစိတ်ကုသခဲ့သော်လည်း လိုအပ်ပါကဆေးရုံတင်ရမည်ဆို၍ ထောင်အာဏာပိုင်များထံ ရက်သတ္တတပတ်ခန့် အချိန်ယူတင်ပြရမှီဖြစ် ကြောင်းကိုလည်း ကိုအောင်သူ၏ဇနီးဖြစ်သူ မမြတ်မြတ်ထွန်းအား ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ပြီး ပြန်လာသော ကိုဘိုဘိုဝင်းလှိုင်၏ မိခင်ကပြောပြပါသည်.။
သူက “ဘိုဘိုဝင်းလှိုင်ကိုလည်း ၃ ရက်နဲ့ ဆေးရုံက ဆင်းခိုင်းတာတွေ ရှိတယ်။ တကယ်လို့ ဒီလူနာက သွေးလွန်သွားရင် ဆေးရုံကို ချက်ချင်း လာပို့နိုင်မလားလို့ မေးတော့ တပတ်လောက်မှ၊ အထက်ကိုစာတင်ပြီးမှ အချိန်ယူရမယ်လို့ပြောတယ်။ နောက်တော့ ဆရာဝန်ကသက်သာတဲ့ အချိန်မှဆင်းပေးလိုက်တယ်။ တခါလုပ်ပေးဖို့ဆိုရင် ရက်သတ္တပါတ် အချိန်ယူပြီးတော့မှ အထက်ကို စာတင်ရတာတွေ ရှိတယ်”ဟုပြောပါသည်။ ကိုဘိုဘိုဝင်းလှိုင် လတ်တလော ခံစားနေရသည့်ငှက်ဖျားနှင့် နှလုံးရောဂါအတွက် ဆေးဝါးလိုအပ်နေသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူက ဆေးဝယ်ပေးခဲ့ရသည်ဟုလည်း သိခဲ့ရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးရဟာ မိမိ၏ယုံကြည်ချက်ကြောင့် နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်သူများအား ဝေးလံခေါင်သီသော ဒေသများသို့ ပို့ဆောင်ပြီးစိတ်ဓာတ်ရေးရာ၊ ခန္ဓာကိုယ်ရေးရာပါ ကျဆင်းအောင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် များဟာနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခံရပြီး ရာသီဥတုဆိုးရွားတဲ့ ဝေးလံခေါင်သီသော ဒေသများမှ အကျဉ်းထောင်များမှာ အကျဉ်းချထားခြင်းခံ နေရပြီး မိသားစုနဲ့ အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခြင်း ခံနေရပါတယ်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) ၏ ၂၀၀၉ အစီရင်ခံစာ..
Annual Report 2009_final
နှစ်သစ်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာက ဘာလဲ
(၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၆ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာပို့စ်ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လူထု စိန်ဝင်း ရဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ )
နှစ်ဟောင်း ကုန်ဆုံးလို့ နှစ်သစ် တစ်ခု ရောက်ပြန်ပြီ။ နှစ်ဟောင်း ကုန်ရက်တွေ နီးကပ်လာတာနဲ့ အမျှ ဂျာနယ်တိုက်တွေက တစ်တိုက်ပြီး တစ်တိုက် လာပြီး မှတ်ချက် စကား ပြောပေးပါ။ ထင်မြင်ချက် ကလေး ရေးပေးပါနဲ့ ပူဆာကြတယ်။ အရင် နှစ်တွေကထက် ပိုပြီးများတယ်။ ရောက်လာမယ့် နှစ်က ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဖြစ်နေတာကိုး။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပပေးဖို့ ကြေညာထားတာ ဖြစ်လေတော့ လူငယ်လေးတွေ သိပ်ပြီး စိတ်အား ထက်သန် နေကြတယ်။ သူတို့လေးတွေ အတော် များများက ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ အခုမှ ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် ကြုံတွေ့ရမှာ ဖြစ်လေတော့ စိတ်အား ထက်သန် နေကြတာ ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အရာပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှု လေးတွေ အချည်းအနှီး ဖြစ်မသွား စေချင်တာကြောင့် အားလုံးကို လိုတိုရှင်း ပြောပေး၊ ရေးပေး လိုက်ပါတယ်။ စကားလုံး ကွဲပေမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ တစ်ခုတည်းပါ။ အခုလာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲဟာ အစိုးရရဲ့ လမ်းပြမြေပုံပါ အချက် ခုနှစ်ချက်မှာ နောက်ဆုံး အချက် ဖြစ်တာ မှန်ပေမယ့် တိုင်းသူ ပြည်သားများ အတွက်ကတော့ နောက်ဆုံး ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် မဟုတ်သေးတဲ့ အကြောင်း ထောက်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဒီအချက်ကို ထောက်ပြရတာလဲဆိုတော့ တချို့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးလိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်း လက်ငင်း ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်ကြီး ဘွားခနဲ ပေါ်ထွက်လာတော့ ပုံစံနဲ့ မစားဝခမန်း ရေးသားပြောဆို နေကြတာ တွေကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံး တွေ့မြင်နေရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ရဲ့ ကျင့်စဉ်တစ်ခုသာ ဖြစ်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်လိုက်တာနဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော် သစ်ကြီး ဘွားခနဲ ပေါ်ထွက် မလာပါဘူး။ ဖဆပလ ခေတ်ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လမ်းစဉ်ပါတီခေတ် ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ် ရွေးကောက်ပွဲကိုမှ ပြည်သူ လူထု အများစုကြီးက ကျေနပ်အားရ မရှိ ခဲ့ကြပါဘူး။ နောက်ဆုံးကျ အာဏာ သိမ်းယူတဲ့ အဖြစ်မျိုး သုံးကြိမ်သုံးခါ ပေါ်ပေါက်တဲ့ အထိ ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါပဲ။
လူငယ်တွေကို မျှော်လင့်ချက်မှာ false hope တွေ မပေးသင့်ကြဘူး။ မစားရဝခမန်း ပြောကြတဲ့ မျှော်လင့်ချက်မှားတွေကို အဟုတ်ကြီး ထင်နေကြပြီး တကယ် လက်တွေ့ ထင်သလို ဖြစ်မလာခဲ့ရင် ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတောင် နားခါး သွားမှာ စိုးရပါတယ်။ လမ်းစဉ်ပါတီ ခေတ်က မစားရဝခမန်း စကားတွေ အဟုတ်ကြီး ထင်ခဲ့ကြရာက နောက်ဆုံးကျ "ဆိုရှယ်လစ်" ဆိုတဲ့ စကား နားဝမှာ ယောင်လို့တောင် မကြားချင် တော့ပါဘူး ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုး ရောက်သွားတာ ထင်ရှားတဲ့ သာဓက ဖြစ်တယ် မဟုတ်ပါလား။ ဒီခေတ် လူငယ်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေး နိုးကြားမှုက အင်မတန် မြင့်ပါတယ်။ ဘယ် နိုင်ငံက ဘယ်လူမျိုးထက်မှ နောက်မကျပါဘူး။ ကြွားတယ်လို့ ထင်ချင်ထင်ပါ။ ဒီမိုကရေစီတို့၊ လွတ်လပ်ခွင့်တို့ သံကုန်ဟစ် နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ထိပ်သီးဆိုတဲ့ နိုင်ငံကြီးက လူတွေထက် အများကြီး သာတယ်လို့တောင် ပြောဝံ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သာဆိုရင် ရော်နယ်ရေဂန်လို ကောင်းဘွိုင် မင်းသားနဲ့ အာနိုးလို အပေါစားအက်ရှင် မင်းသားမျိုးကို သမ္မတရာထူး၊ ဘုရင်ခံ ရာထူးမျိုးအတွက် ဘယ်တော့မှ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ကြမှာ မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။
လက်ရှိ သမ္မတ အိုဘားမား အရည်အချင်း ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဆိုတာလည်း အခုဆို သက်တမ်းတစ်နှစ် ရှိသွားပြီ ဆိုတော့ မှန်းဆပုံဖော် ကြည့်လို့ ရနေပါပြီ။ အခုထိတော့ ပြည်တွင်းရေး ကိစ္စတွေမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်ပရေးရာ ပါလက်စတိုင်း ကိစ္စ၊ အီရတ်ကိစ္စ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်ကိစ္စ၊ အီရန်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားကိစ္စ စတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ အိုဘားမားဝါဒ၊ အိုဘားမား ဗစ်ရှင် ဆိုတာမျိုး တစ်ခုမှ မတွေ့ရပါဘူး။ လူတကာလိုက်ပြီး မျက်နှာချိုသွေး နေတဲ့ ပေါ်ပြူလာ နိုင်ငံရေးသမား (populist) လုပ်ရပ်မျိုးတွေချည်း တွေ့နေရပါတယ်။ ဖျော်ဖြေရေး သမားတွေလို တွေ့သမျှ လူကို မျက်နှာချိုသွေး၊ ပုံရိပ် ကောင်းကောင်း ကြော်ငြာ (publicity) များများ လုပ်နိုင်လို့သာ သမ္မတ ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ မြန်မာလူမျိုးတွေသာ ဆိုရင် ဘယ်နည်းနဲ့မှ ရွေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မျှော်လင့်ချက်မှားတွေ ပေးပြီး ကျုံးအော်နေကြ သူတွေဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေကို အထင်သေး နေကြတာ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာ လူမျိုးတွေအကြောင်း သေသေချာချာ နားလည်ရင် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးကို နားမလည်နိုင်ဘူး။ မြန်မာ လူမျိုးတွေအကြောင်း နားလည်ဖို့ ဆိုရင်လည်း မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ အေးအတူပူအမျှ အတူတကွ နေထိုင်ခံစား နေမှ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသား မျက်နှာဖြူ နိုင်ငံရေး ဂုရုဆိုသူတွေ ရေးတဲ့ မြန်မာပြည်အကြောင်း စာအုပ်တွေ ဖတ်ပြီး မြန်မာလူမျိုး အကြောင်း လေ့လာလို့ မရပါဘူး။ မြန်မာတွေကို ဆရာလုပ်ချင်ရင် ကိုယ်တိုင် မြန်မာတွေ ကြားမှာနေပြီး မြန်မာတွေရဲ့ စကားသံတွေကို နားထောင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အခုမှ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတာ ကြားဖူးတဲ့ လူငယ်လေးတွေကို အမှန်အတိုင်း အသိပေးသင့် ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ နောက်ဆုံးပန်းတိုင် မဟုတ်တဲ့ အကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ ခရီးစဉ်ကြီးရဲ့ ပထမဆုံး ခြေလှမ်း တစ်လှမ်းသာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း သိစေသင့်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ နိုင်ငံရေးထက် တကယ်တော့ ရွေးကောက်ပွဲလွန် နိုင်ငံရေးက ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာ ဖြစ်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ နိုင်ငံရေး ဆိုတာကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ပါတီတွေ အချင်းချင်း အပြိုင်အဆိုင် ဟောပြောကြ၊ ကြော်ငြာကြ၊ ဝါဒဖြန့်ကြ လုပ်မှာပါပဲ။ ဘာမှ မဆန်းပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲလွန် ကာလမှာ ဖွဲ့စည်းမယ့် အစိုးရက ဘယ်လို အစိုးရ ဖြစ်မလဲ၊ လွှတ်တော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ဘယ်လို ရှိမလဲ ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလ တပ်ရဲ့ အနေအထားက ဘယ်လို နေမှာလဲ တိုင်းရင်းသား ဒေသ အသီးသီးမှာ ဖွဲ့စည်းမယ့် လွှတ်တော်တွေမှာ ဘယ်လို လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရှိမှာလဲ စတဲ့ အချက်တွေက ပိုအရေးကြီးပြီး ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ကို အဆုံးအဖြတ် ပေးမှာက ရွေးကောက်ပွဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပေါ်ထွက်လာမယ့် အဆောက်အအုံတွေသာ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
(၆၃) နှစ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ ကြေငြာချက်
ပေးပို့ ပေးသော ဒီမိုဝေယံ အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကိုမေတ္တာတို့ အငြိမ့်အဖွဲ့ လာရောက်ဖျော်ဖြေခွင့်ရမည်ဟု သတင်းရရှိ.....
အဖွဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့တွင်အစီအစဉ်၂ပိုင်းခွဲပြီး တင်ဆက် ကပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးစောင့်စား
မျှော်လင့်နေကြသော ပရိတ်သတ်များအား သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို အကောင်းအထည်မဖော်တာဟာ ထမင်းစားဖိတ်ပြီး၊ထမင်းပွဲပြင်၊
အသစ် ကျင်းပရေးကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က လုံးဝလက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်
ထားတာဖြစ်ပါတယ်” “၁၉၉၀ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်
ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ပထမခြေလှမ်းအနေ နဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ခေါ်ပေးရလိမ့်မယ်” ။
တာပဲလို့ကျမ ပြောချင်ပါတယ်” ။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, January 29, 2010 Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီက ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် မြို့နယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့များ တွေ့ဆုံ
ဇန်န၀ါရီ ၂၆ က ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်း ရွှေဂုံတိုင်ရှိ အမျိုးသာီးမိုကရေစီပါတီ ဌာနချုပ်မှာ ပါတီ၏ တိုင်းစည်းရုံးရေးအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်အဖွဲ့များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ပါတီတွင်း စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဆွေးနွေးကြသည်ဟု ဆိုသည်။
လက်ရှိတရားဝင်ပါတီတခု အဖြစ်သာမက၊ အဓိက အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးအင်အားစုဖြစ်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီက ယခုကဲ့သို့ ပါတီတွင်း တွေ့ဆုံစည်းဝေးနေကြသည်ကို ပုံမှန်ဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် ရှုမြင်ကြောင်း၊ အခုတလောမှ ပေါ်ပေါက်လာသော အဖွဲ့များ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များက စစ်အစိုးရနှင့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းပြီး ပြည်သူလူထုထံသို့ တိုက်ရိုက် စည်းရုံးရေးဆင်းခြင်း၊ သဘောထားအာဘော်များ ထုတ်ပြန်နေခြင်းတွေကသာ ထူးဆန်းသည်ဟု ဆိုချင်ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေးပွင့်လင်းမှုများ ဖြစ်ထွန်းလာမည်လား၊ နိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုများ ချမှတ်လာမည်လားကို စောင့်ကြည့်ရန်သာ ရှိကြောင်း ပြည်တွင်းရှိ ဂျာနယ်အယ်ဒီတာတဦးက မှတ်ချက်ပေးသည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ နိုင်ငံရေးပါတီဝင်ဟောင်းတဦးက
“ ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတယ်။ ပါတီတွေက တလအတွင်း စတင် ဖွဲ့ကြတယ်။ ၁၉၈၉ တနှစ်လုံးမှာ စစ်တပ်က အတိုက်အခံတွေကို နှိမ်နင်းတယ်။ ၁၉၉၀ နှစ်ဆန်းနောက်ပိုင်းမှာမှ ကျန်ရစ်တဲ့ ပါတီကြီးတွေနဲ့ ပါတီဝင်တွေက ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး စည်းရုံးရေးတွေ လုပ်ကြရတယ်။ အဲသည်တုန်းက အချိန်ကို အခုနဲ့ နှိုင်းကြည့်လို့ ရတာပေါ့နော်။ အခုအချိန်မှာက ၂၀၁၀ တနှစ်တွင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စက ဘာမှန်းတောင် မသိရသေးဘူး။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကိစ္စ၊ နယ်စပ်ဒေသ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာက တောင်းဆိုထားတာ … အဲဒါတွေကို ဒီရှေ့ပိုင်း ၆ လ အတွင်း ဖြေရှင်းနိုင်မှာလား။” ဟု မေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်။
နေအိမ်ပြင်ဆင်မှု တားမြစ်ခံထားရမှုအပေါ် လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ သံသယဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို....
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နေအိမ်ပြင်ဆင်မှု တားမြစ်ခံထားရမှုအပေါ် သွေးရိုးသားရိုးမှ ဟုတ်ရဲ့လားဟု သံသယဖြစ်မိကြောင်း ပြောဆိုတယ်လို့ ဒီကနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
" ဒီနေ့အန်ကယ်တို့ နေ့လည်(၁)နာရီ မှ(၃)နာရီခွဲ အထိ (၂)နာရီခွဲလောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နေအိမ်ပြင်ဆင်မှု တားမြစ်ခံထားရတဲ့ ကိစ္စ၊ နောက်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.....။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ် ပြုပြင်နေတာ တဝက်တပျက်မှာ စည်ပင်က တဝက်တပျက်မှာ ရပ်ဆိုင်းခိုင်းပါတယ်......။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလ(၂၁)ရက်နေ့က ဦးအောင်ဆန်းဦးက နေအိမ်ပြုပြင်တာကို ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ လျှောက်ထားချက် ကိုတရားရုံးက တားဝရမ်းထုတ်တယ်....။ အဲ့ဒီကိစ္စအတွက် လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ (၄)ရက်နေ့မှာ တရားရုံးမှာပြန်ပြီး သဘောထားတင်ပြရမှာပါ....။ အဲ့ဒီကိစ္စအတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်။ .....ုဒီနေအိမ်ပြင်ဆင်ခွင့်ရဖို့ အတွက်စည်ပင်မှာ ပြင်ဆင်ခွင့်တောင်းပြီးမှ ပြင်ဆင်ခဲ့တာပါ။ နောက်အကျိုးအကြောင်း ဘာမှမသိရပဲ ပြင်ဆင်ခွင့်တားမြစ်ခဲ့တယ်...။ နောက်အခု ဦးအောင်ဆန်းဦးက တရားရုံးမှာ တားဝရမ်းလျှောက်ထားတယ်.... ဒါတွေကို ခြုံငုံစဉ်းစားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီဥစ္စာသွေးရိုးသားရိုးမှ ဟုတ်ရဲ့လားလုိ့ တွေးမိတယ်လို့ ပြောပါတယ်...။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၁ခုနှစ်မှ စ၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကိုဖြစ်သူ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ခံယူထားသည့် ဦးအောင်ဆန်းဦးမှ နေအိမ်ပိုင်ဆိုင်လိုခွင့် နှင့်ပတ်သတ်ပြီး တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်လိုမှု တရားရင်ဆိုင်ရန် စစ်အစိုးရနှင့် ဦးအောင်ဆန်းဦး၏ ဇနီးဖြစ်သူ (မေတ္တာဦး ကလောင်နာမည်ဖြင့် ရွှေအမြူတေ မဂ္ဂဇင်းတွင် ခရီးသွား အခန်းဆက်ဆောင်ပါး ရေးသားနေသူ ဒေါ်သိန်းလဲ့နွယ်(ခေါ်)ဒေါ်လဲ့လဲ့နွယ်သိန်း)တို့ ပါဝင်ပတ်သတ်နေကြောင်း သိရှိရပါတယ်...။ ယခုတဖန် ဦးအောင်ဆန်းဦးမှ နေအိမ်ပြင်ဆင်မှုရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ တရားရုံးမှာ လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုတဲ့ အတွက် တရားရုံးမှ တားဝရမ်းထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အခြေအနေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆက်လက်ပြောဆိုရာမှာ " အိမ်ကတဝက်တပျက် တို့လို့တန်းလန်းဆိုတော့ ပစ္စည်းတွေက ဟိုနားပုံ ဒီနားပုံပေါ့ ..... အပေါ်ထပ်မှာ မျက်နှာကျက်ကျောက်ပြားတွေ ခွာထားတယ် အိမ်ခေါင်မိုးတွေက ဟောင်းနွမ်းနေတော့ အောက်ကနေကြည့်ရင် အလင်းရောင်တွေ မြင်နေရတာပေါ့.... အိမ်ကဟောင်းနွမ်းနေတော့ နေရာတိုင်းမှာပြင်ဆင်ဖို့ လုပ်ထားရတာလေ ... တဝက်တပျက်နဲ့ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတော့ နေရထိုင်ရတာ အဆင်မပြေဘူးလို့ အန်ကယ်မြင်တယ်... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ နေထိုင်ရတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှမပြောပါဘူး"
ဆက်လက်ပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးမှ နိုဝင်ဘာလမှာ လွှတ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောဆိုရာမှာ....
........ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီပြောကြားချက် တကယ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါဟာမတရားတဲ့ ပြောကြားချက်ဖြစ်တယ်.. နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်မှာ ပြင်ဆင်ဖို့တင်ထားချိန်မှာ ဒီလိုပြောကြားချက်က တရားဥပဒေကို လွှမ်းမိုးတဲ့ သဘော သက်ရောက်နေတယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်....
ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့က ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့မှာ မြို့တော်ခန်းမမှာကျင်းပတဲ့ ဋ္ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၊ မြို့မိမြို့ဖများ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်းဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဒီနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာ လွတ်ပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ပါတီအရေးကိစ္စများကိုလည်း ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုသွားပါတယ်......။
ရခိုင်လူငယ် ကိုငွေစိုးလင်း အား အာဏပိုင်များက ထောင်ဒဏ် ၁၃နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ခြင်း
အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနဲ့ မနှစ် နှစ်လည်ပိုင်းက ဖမ်းထားတဲ့ ကိုငွေစိုးလင်းကို ဒီကနေ့ ထောင်ဒဏ် ၁၃ နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ အင်းစိန်ထောင်ဝင်းအတွင်းရှိ အထူးတရားရုံးကနေ အီလက်ထရောနစ်ပုဒ်မ ၃၃-က နဲ့ ၁ဝနှစ်၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးအက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃-၁ နဲ့ ၃နှစ် ပေါင်း ၁၃ နှစ် ချလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၆ ရက် နေ့က ကိုငွေစိုးလင်းကို အာဏာပိုင်တွေ ဖမ်းဆီးခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထောင်နဲ့နီးစပ်သူတဦးက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“သူက ဖမ်းဆီးတဲ့ရက်က ၂၆-၆-၂ဝဝ၉ မှာဖမ်းတယ်။ သူတို့ အင်တာနက် ဆိုင်က အထွက်မှာ နှစ်ယောက်ဖမ်းပြီးတော့ အောင်သပြေစစ်ရေးမှာ စစ်ဆေးတယ်၊ စစ်ဆေးပြီးတော့ ကိုနိုင်ငံလင်းကို ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ ကိုငွေစိုးလင်းကိုတော့ အင်း စိန်ထောင်ပို့ပြီးတော့ အင်းစိန်ထောင်အတွင်း အထူးတရားရုံးကနေ အခု အမိန့်ချ တာပေါ့” ကိုငွေစိုးလင်းရဲ့အစ်ကို ကိုအောင်ထွန်းမြင့်ကိုလည်း ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ဆန္ဒခံ ယူပွဲ လုပ်စဉ်က မဲရုံတွေကို ရဆကသအါးတ်ပုံရိုက်ယူလို့ဆိုပြီး ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ချမှတ်ထား တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရုံးထုတ်စစ်နေတဲ့ အမှုတွဲတွေကို ပြောရရင်တော့ ဖောက်ခွဲ ပုဒ်နဲ့ တရားစွဲထားတဲ့ ရခိုင်ကျောင်းသားလူငယ် ၁၁ ဦးကို ဒီကနေ့ အင်းစိန်ထောင်း တွင်း တရားရုံးမှာ ဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူတို့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက မိသားစုတွေက ထောင်ဝင်စာ လာတွေ့စဉ်မှာ ထောင်ဝန် ထမ်းတွေက နည်းမျိုးစုံ ကန့်သတ်ချုပ်ခြယ်တာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကိုလည်း ထောင်နဲ့နီးစပ်သူတဦးကဘဲ အခုလို ပြောပြပါ တယ်။ “သူတို့မိသားစုတွေ ဒီတပတ် ထောင်ဝင်စာလာတွေ့တဲ့အချိန်မှာ သူတို့ ရခိုင်တွေဆို တော့လည်း ရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ ပြောတာပေါ့။ ဒါကို လိုက်မှတ်တဲ့ အက်စ်ဘီ ဝန်ထမ်းတွေကနေ သူတို့ ဗမာလိုမပြောတဲ့အတွက် လူတွေ့ချိန်စကား ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းကို ပိတ်ပစ်လိုက်တာပေါ့၊ တွေ့ချိန်အပြည့်အဝလည်း မရ လိုက်ဘူး။ တွေ့ချိန်ကလည်း ဘာမှ မရှိဘူး၊ မိနစ်၂ဝ လောက်ဘဲ တွေ့ခွင့်ရတယ်၊ နောက်တခေါက် တွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်း ဗမာလိုပြောမှ တွေ့ခွင့်ပေးနိုင်မယ်၊ ဖုန်း ပြောခွင့်ပေးနိုင်မယ်၊ အဲဒီ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားဘဲ ပြောချင်တာပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ လို့ အခုလို အကျပ်ကိုင်လိုက်တဲ့အတွက် သူတို့ ဗမာလိုဘဲ ပြောရတာပေါ့..” ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့က ကျောင်းသားလူငယ် ၁၁ ဦးကို ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်အ တွင်းက ဖမ်းဆီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, January 28, 2010 Links to this post
ပစ္စုပ္ပန် အပေါ်မှ ပစ္စက္ခ ပစ္စလက္ခတ်များ
ကဗျာ တပုဒ်... လုပ်လုပ်နေရ...
ကဗျာဆရာ အလုပ် မလုပ်ဘူး အပြောခံရ...
ကမ္ဘာကြီးကို လည်ပတ်စေတဲ့ ရေနံဈေးနှုန်းအကြောင်း ...
တာလီဘန်နဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ အနိုင်အရှုံးအကြောင်း ...
ဆေတန်ရဲ့ ဂျီးဆပ်စ်အပေါ် ထားခဲ့သော အဖြူစင်ဆုံး အမုန်းအကြောင်း ...
အတ္တလန်းတစ်စီးတီးဆိုတာ မပျောက်မပျက် ဆက်လက် ရှင်သန်နေသေးကြောင်း ...
ကိုယ်မျက်နှာကိုပဲ ကိုယ်ကြည့်တတ်သူတွေသည်သာ သူတော်စင်များ ဖြစ်ကြောင်း ...
လကမ္ဘာဆိုတာ ဘုံ ၇ ဆင့်မှာ တတိယအဆင့်ပဲ ရှိသေးတယ်လို့ ပြောဖူးတဲ့ အဖိုးကြီးတယောက်ကို
ရူးနေတယ်လို့ ထင်ခဲ့မိကြောင်း ...
ဒုတိယ နိဗ္ဗာန်မှာ တတိယအရွယ်ရဲ့ စတုတ္ထ ဝေဒနာကို ပဉ္စမမြောက် အဖြစ် ခံစားရသူကို
ကိုယ့်အိမ်ကကားကို ကိုယ်တိုင် မောင်းခွင့် မရသည်မှာကလည်း ၀ဋ်ကျွေးတခုပင် ဖြစ်ကြောင်း...
စားချင်သလို စားခွင့် မရသည့်အခါ လူတယောက်သည် ပြိတ္တာ တကောင်မျှသာ ဖြစ်ကြောင်း...
မည်သို့ ဖြစ်စေ အရာရာကို ပစ္စလက္ခတ်ထား-ခဲ့/မိ သူကို
အရာရာကလည်း တမင်တကာ/ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပစ္စလက္ခတ် မေ့ထားတတ်ကြောင်း...
အိမ်ခေါင်းရင်းက အိမ်မြှောင် စုတ်ထိုးသမျှ ရုပ်ဆိုးရသော ဘ၀သည်လည်း သဘာဝ ကျကြောင်း...
အောင်သာငယ် ဆိုသော ငတိသည်လည်း ငါးပိမစားရသော အမေရိကားမှာ ငါးပိ ငတ်ကြောင်း...
သစ်ကောင်းအိမ်ဆိုသော ကဗျာဆရာတယောက်သည်လည်း တော်တော် အရပ်ရှည်ကြောင်း. ..
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သွေးသောက်ရဲသူများကိုလည်း တွေ့ရမည် ဖြစ်ကြောင်း...
ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ဤကဗျာသည်လည်း နိုင်ငံရေးများပါကြောင်း...
ဇန်န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၀
နအဖ စွပ်စွဲချက်သည် သိက္ခာချလိုခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီ(BLC) မှပြော
စစ်အစိုးရက ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီ(BLC) ကို ဖောက်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပတ်သက်မှုရှိနေကြောင်း စွပ်စွဲချက်သည် အခြေအမြစ်မရှိကြောင်း အဖွဲ့ဥက္ကဌက တုန့်ပြန်ပြောဆိုသည်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၂၇) ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဖောက်ခွဲရေးသမားများသည် (BLC) မှ စေလွှတ်ထားသူများဟု ဆိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီဥက္ကဌ ဦးသိန်းဦးက တုန့်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကျနော်တို့ (BLC) က ဒီအလုပ်တွေလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော်တို့ အလုပ်ကိုက တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ဥပဒေတွေကို ဆန်းစစ်သုံးသပ် လေ့လာပြီးတော့ သတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အဖွဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ စစ်အာဏာရှင်တွေက တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိဘူး၊ ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေကို အရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိလို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်တရားရုံးမှာ တရားစွဲဆိုဖို့ လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုသတင်းအမှားကို ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ” ဟု ပြောသည်။
ယခုလ (၂၂) ရက်နေ့က ကျော်ဇေလင်း (ခ) ကိုဆိုင်းဆိုသူနှင့် အပေါင်းအပါ (၁၁) ဦးကို ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများနှင့်အတူ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်အတွင်း ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇန်နဝါရီလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ကျော်ဇေလင်းသည် ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းသို့ နအဖစစ်အစိုးရ၏ စွပ်စွဲချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီအား နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကြားတွင် သိက္ခာချလိုသည့်အတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု ဦးသိန်းဦးက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့က အခု နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ နိုင်ငံတကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့ကို လှုံ့ဆော်မှုတွေ လုပ်နေပါတယ်၊ ပြောရမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျူးလွန်နေတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို စုံစမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
စစ်အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်း အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကို စွပ်စွဲမှုများ ပြုလုပ်နေလျက်ရှိပြီး ပြီးခဲ့သည့် ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့က ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကိုလည်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ လက်ချက်ဟု ၎င်းတို့ပိုင် သတင်းမီဒီယာများတွင် ဖော်ပြခဲ့သေးသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွင်းက မတရားသင်းအဖြစ် ကြေညာထားခဲ့ပြီး ယခုအခါ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဆက်လက် စွပ်စွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုညီညီအောင် (ခ)ကိုကျော်ဇောလွင် အားအာဏာပိုင်များက မိသားစုတွေ့ခွင့်နှင့်ထောင်ဝင်စာတွေခွင့်ကိုလုံးဝခွင့်မပြုတော့ကြောင်း
Information Release Nyi Nyi Aung is Banned Family Visit_Burmese
Information Release Nyi Nyi Aung is Banned Family Visit _ English
မိုင်းလားအဖွဲ့ မှ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တဦး လုပ်ြကံခံရခြင်း
အာဏာရှင်ကို အဆုံးသတ်စေဖို့တာဝန် ဘယ်သူ့ ပခုံးပေါ် ကျရောက်နေပြီလည်း။
၁၉၈၈ ခုနှစ် ရှစ်လေးလုံး လူထုအရေးတော်ပုံကြီးတုန်းက ကျောင်းသားတွေ အာဏာရှင်တွေကို စတင်ဆန့် ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတယ်။ ကျောင်းသားတွေမှာ လက်နက်မရှိတာတောင် သတ္တိသွေး ပြခဲ့ကြတယ်။ ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီး အာဏာရှင်ကို ဆန့် ကျင်ခဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူ့ စစ်သားတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ အာဏာရှင်တွေကို ဘုရားသားတော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ သံဃာတော်တွေ စုပေါင်းတော်လှန်ခဲ့ကြတယ်။ သံဃာတွေမှာ လက်နက်မရှိတာတောင် သတ္တိသွေး ပြခဲ့ကြတယ်။
ဒီနှစိ ၂၀၁၀ မှာ နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ တပ်မတော်သား (စစ်သား) တွေ အာဏာရှင်ကို မနှေးအမြန် ဆန့် ကျင်တော်လှန်ကြရမယ်။ တပ်မတော်သား (စစ်သား) တွေမှာ လက်နက်တွေ ရှိကြတယ်။ သတ္တိပြဖို့ ဘဲ လိုတယ်။
ပြည်သူကို မတရား အနိုင်ကျင့် စိုးမိုးနေတဲ့ အာဏာရှင်တွေကို အဆုံးသတ်ပေးဖို့တာဝန်ဟာ ဘယ်သူ့ ပခုံးပေါ်မှာ ကျရောက်နေပြီးလည်းဆိုတာ သိကြပါ။ ပြည်သူ့ အတွက် ဘယ်သူအောင်ပွဲခံပေးမှာလည်း။ ဘယ်သူ တာဝန်ကျေမှာလည်း။
ပြည်သူနဲ့လက်တွဲပြီး အာဏာရှင်ကို တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူ့ စစ်သားတွေရဲ့ပြောစကားတွေနဲ့ပုံရိပ်လွှာတွေကို ဖေါ်ပြလိုက်တယ်။ အစဉ်အလာ ဆက်ထိန်းကြဖို့ နောင်တော် တပ်မတော်သားတွေရဲ့အသက်သွေးတွေ စိတ်ဓါတ်တွေ လက်ရှိ တပ်မတော်သားတွေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ စီးဆင်းပါစေသောဝ်။
စစ်သည်တော် ကျင့်ဝတ်ထဲမှာ “ရန်သူကို နေလို မီးလိုကျင့်၊ ပြည်သူကို ရေလို လ လိုကျင့်” ဆိုတာ ပါပါတယ်။ ပြည်သူ့ ရန်သူဖြစ်တဲ့ နအဖအာဏာရှင် (ရန်သူ) တွေကို နေလို မီးလိုကျင့်နိုင်ပြီး၊ ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ ရေလို
လ လို ကျင့်နိုင်ပါစေသား။
လူ့ အခွင့်ရေး မြန်မာ့ ကွန်ရက်.
Statement No.1_2010 of BNHR
ဇန်န၀ါရီလ ၂၇ ရက်မွေးနေ့ ရှင်နိုင်ငံကျော်စွယ်စုံအနုပညာရှင် ကိုဇာဂနာခေါ်ကိုသူရ အတွက်မွေးနေ့ တေးသီချင်းတွေပါ.
ဇန်န၀ါရီလ (၂၇) ရက်နေ့ မှာ ကျရောက်တဲ့ ကိုဇာဂနာ (ခ) ကိုသူရရဲ့မွေးနေ့ မင်္ဂလာမှာ ကိုဇာဂနာတစ်ယောက် အနှောင်အဖွဲ့ ကင်းလွတ်စွာနဲ့အမှန်တရားကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် အနှောင့်အယှက်တားဆီးပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိဘဲ ၀ါသနာပါသော ပြည်သူ့ အကျိုးပြု အနုပညာလုပ်ငန်းများ အပြည့်အ၀ လုပ်ကိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, January 27, 2010 Links to this post
ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက ချစ်မြတ်နိုး လေးစားရတဲ့ ကိုဇာဂနာ (ခ) ကိုသူရ၏ မွေးနေ့(ဇန်န၀ါရီလ - ၂၇ ရက်နေ့ ) အထိမ်းအမှတ် အထူးတင်ဆက်မှု။
ကြောက်မွှေးပါ ဇာဂနာ နုတ်ဆိုတဲ့ ကိုသူရ ရဲ့ အမှတ်တရ
Labels: မွေးနေ့ အမှတ်တရ
UNHCR နှင့် အမေရိကန်တို့ လက်အောက်က နို့ ဘိုး ဒုက္ခသည်များ၏ အခက်အခဲ အခြေအနေများ။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နို့ ဘိုးဒုက္ခစခန်းအပါအ၀င် မြန်မာဒုက္ခသည်များစခန်းအတွင်းမှာ UNHCR နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအ၀င် တတိယနိုင်ငံများရဲ့ဒုက္ခသည်များခေါ်ဆောင်မှုစီစဉ်မှုတွေဟာ တစ်လွှဲဖြစ်နေပြီး ဒုက္ခအမှန်တကယ်ရောက်နေသူများကို ကူညီရာမရောက်ဘဲ ပိုလို့ ဒုက္ခရောက်စေသလို ပစ်ပယ်ထားသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ယခုရေးသားချက်အား သေချာစွာ ဖတ်ရှူပြီး မြန်မာပြည်သားချင်း ကိုယ်ချင်းစာသောအားဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီသောအားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာများသို့ဆက်လက်ဖြန့် ဖြူး အသိပေးပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။
UNHCR နှင့် U.S
ပြန်လည် ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, January 26, 2010 Links to this post
သင်တို့၂၀၁၀၊ အားလုံးဝိုင်းတိုက်ကြ။
(prmg61 မှ ပြန်လည်ဖေါ်ပြပါသည်။ တေးရေး တေးဆိုများအားလုံးအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ပြန်လည် ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးက လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးမည်ဟု ပြောဆိုခြင်းမှာ တရားမဝင်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ယနေ့ ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာတွင် ပြန်လွှတ်ပေးမည်ဟု မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့၌ ပြီးခဲ့သည့် ကြာသပတေးနေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးက ပြောကြားခဲ့မှုအပေါ် အန်အယ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေက သုံးသပ်ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
“ပါးစပ်နဲ့ ဒီလိုပြောတာက တရားဝင်လို့ ယူဆလို့တော့ မရဘူးပေါ့။ ဥပဒေအရ အထမမြောက်ဘူးလေ။ တရားဝင် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတို့၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တို့၊ အမိန့်တို့ ထွက်မှသာ ခိုင်မာတဲ့ အချက်လို့ ခံယူရမှာပေါ့” ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယခုလ ၂၁ ရက်နေ့၌ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးသည် မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့မှ မြို့မိမြို့ဖများ၊ ကြံ့ဖွံ့များ၊ ပညာရေးဌာန၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများကို မြို့တော်ခန်းမ (အားကစားခန်းမ) ၌ တွေ့ဆုံစဉ် ယင်းသို့ပြောကြောင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ အန်အယ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောသည်။
အန်အယ်ဒီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နိုဝင်ဘာလနှင့် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးအား လာမည့်လတွင် လွှတ်ပေးမည်ဟု ပြောခဲ့ကြောင်း အန်အယ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်ထံမှ သိရသည်။
“တပ်မတော်ဟာ ညစ်ပတ်တဲ့ အစိုးရ မဟုတ်ဘူး။ အာဏာမမက်ဘူး။ ဦးတင်ဦးကို အရင်လွှတ်ပေးမယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုဝင်ဘာလမှာ လွှတ်ပေးမယ်လို့ မြို့နယ်ခန်းမမှာ ပြောတာ။ ကျနော့်ကို ဝန်ထမ်းတွေထဲက ပြောပြတာ” ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယနေ့ထုတ် ရိုက်တာသတင်း တပုဒ်တွင်လည်း အန်အယ်ဒီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးကို လာမည့်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် လွှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုဝင်ဘာလတွင် လွှတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်ဟု မျက်မြင်များကို ကိုးကားဖော်ပြထားသည်။
လာမည့်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး နေအိမ် အကျယ်ချုပ်သက်တမ်း ၆ နှစ် ပြည့်တော့မည်ဖြစ်ပြီး လွတ်မြောက်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း သားဖြစ်သူ ဦးသန့်ဇင်ဦး (ဥက္ကဌ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေ - ဂျပန်ဌာနခွဲ) က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အငြိမ်းစား ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် မေလ ၃ဝ ရက်နေ့က စည်းရုံးရေးခရီး လှည့်လည်စဉ် အထက်မြန်မာပြည် ဒီပဲယင်းမြို့၌ စစ်အစိုးရ လက်သပ်မွေး လူအုပ်စုကြီး၏ ရိုက်နှက်ခြင်း ခံရပြီးနောက် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့ ကလေးအကျဉ်းထောင်သို့ ပို့ဆောင်ခံရကာ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ ရန်ကုန်မြို့ရှိ သူ၏ နေအိမ်တွင် ယနေ့ထိတိုင် အကျယ်ချုပ် ချခံနေရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စစ်အစိုးရ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေထံ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ အတွင်းက အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသည့် ပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး အပါအဝင် ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ပြုရန် စာရေးသား တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ယခုထိ တွေ့ခွင့် မရသေးပေ။
နအဖ စစ်အာဏာပိုင်များမှ ရခိုင်စီးပွားရေး သမားများအပေါ် အနိုင်ကျင့် စော်ကားမူနှင့် ပတ်သက်ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တဦး၏ ဖွင့်ဟ ပြောကြားချက်
ရခိုင်ပြည်နယ်က ရခိုင်စီးပွားရေးသမားတွေအပေါ် နအဖ စစ်အာဏာပိုင်တွေ အနေနဲ့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အနိုင်ကျင့်စော်ကားနေတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီအထဲက လတ်တလော ဖြစ်စဉ် တခုကို အများပြည်သူတွေ သိရှိနိုင်အောင် ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျနော်နာမည်ကို မဖေါ်ပြနိုင်တဲ့အတွက် အားလုံး နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။ နာမည် မဖေါ်ပြနိုင်ပေမယ့် ဒီဖြစ်စဉ်တခုလုံးမှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေတဲ့အတွက် ခုပြောပြမယ့် အကြောင်းအရာ အချက်အလက်တွေ အားလုံးကို ကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော် စစ်တွေမှာ ၁၉၅၆ ခုနှစ် ဖဆပလ အစိုးရ ခေတ်ကတည်းက တည်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ ကုန်သိုလှောင်ရုံ ၁၄ လုံးကို နိုင်ငံတော် နအဖ စစ်အစိုးရက နိုဝင်္ဘာလက လေလံပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကုန်လှောင်ရုံတွေကို အမာစား ပျဉ်းကတိုး သစ်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားပြီး ကုန်လှောင်ရုံတလုံးမှာ သစ်မာ ပျဉ်းကတိုး တန်ချိန် ၁၂၀ စီ ပါဝင်ပါတယ်။ တခြား တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေလည်း အများကြီး ပါဝင်ပါတယ်။ လေလံကိုတော့ ကုန်သွယ်လယ်ယာက ခေါ်ယူတာ ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာ တစောင်ကို ကျပ် ၁၀၀၀၀ နဲ့ ၀ယ်ယူရပြီး လေလံဆွဲလိုသူတွေကို Deposit အဖြစ် ကျပ်ငွေ သိန်း (၅၀) ကို သွင်းခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စစ်တွေမြို့က စုစုပေါင်း ၂၄၈ ဦးက လေလံဆွဲဖို့ လျှောက်လွှာ တင်ခဲ့ကြပါတယ်။
နိုဝင်္ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှာတော့ လေလံ ဆွဲလိုသူတွေ အနေနဲ့ နေပြည်တော်ကို လာရမယ်လို့ ဆင့်ခေါ်တဲ့ အတွက် လေလံလျှောက်လွှာတင်ထားတဲ့ ရခိုင်စီးပွားရေး သမားတွေဟာ နှစ်ယောက် တအုပ်စု သုံးယောက် တအုပ်စီ စစ်တွေက လေယာဉ်နဲ့ နေပြည်တော်ကို ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။
နေပြည်တော်ကို သွားရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့လို အဖွဲ့ တဖွဲ့စီမှာ လေယာဉ်ခ၊ တည်ခိုခန်းခနဲ့ စားစရိတ်တွေ အပါအ၀င် ကျပ်ငွေ (၁၀) သိန်းပါးခန့်ကုန်ကျပါတယ်။
နေပြည်တော်ကို ရောက်တဲ့အခါ ဂိုဒေါင်တွေ အတွက် လေလံတွေကို အများမြင်ကွင်းမှာ ဆွဲတာမဟုတ်ဘဲ ဂိုဒေါင် ၁၄ လုံး အတွက် ကိုယ်ပေးနိုင်မယ့် ငွေကြေး Amount ကိုရေးပြီး မဲဗုံးလို လုပ်ထားတဲ့ သေတ္တာတလုံးထဲမှာ ထည့်ခိုင်းပါတယ်။ အများစု ရခိုင်ကလာတဲ့ စီးပွားရေး သမားတွေက သိန်း (၃၂၀) ပတ်ဝန်းကျင်ခန့် ကို ရေးပြီး ထည့်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သိန်း (၃၅၀) ပေးမယ်ဆိုပြီး စာရွက်မှာ နေရပ်လိပ်စာ အစုံရေးပြီး ထည့်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဲသလို ထည့်ပီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်က စီးပွားရေး သမားတွေကို ပြန်သွားနိုင်ပါပြီ နောက်မှ လေလံရတဲ့ သူတွေကို အကြောင်ကြားပေးမယ် လို့ သက်ဆိုင်ရာက ပြောဆိုတဲ့ အတွက် အားလုံး နေပြည်တော်ကနေ စစ်တွေကို ပြန်လာ ခဲ့ကြရပါတယ်။
အမှန်အားဖြင့် လေလံပစ်တဲ့ လုပ်နည်း အစဉ်အရ ဆိုရင် လေလံကို အများရဲ့ မြင်ကွင်းမှာ ပစ်ရပါတယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်လောက်ပေးတယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်လို ပိုပေးတယ် စသဖြင့် နောက်ဆုံး အများဆုံး ပေးနိုင်တဲ့သူကို လေလံကို ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဘယ်သူကတော့ လေလံကို ရသွားပါတယ် ဆိုပြီး ကျေညာကာ လေလံဆွဲတဲ့သူတွေ အားလုံး မျက်မြင် ရှေ့မှာ တရား သဖြင့် ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရပါတယ်။ ခုတော့ ဒီလို မဟုတ်ဘဲ ပေးနိုင်တဲ့ ငွေကြေးတန်ဖိုးကို ရေးခိုင်းပြီး သေတ္တတလုံးထဲမှာ ထည့်ခိုင်းပါတယ်။ ပီးရင် ကိုယ်ပြည်နယ်ကို ကိုယ်ပြန်နိုင်ပြီလို့ ပြောပါတယ်။ ခုလို လုပ်တာဟာ လုံးဝ နည်းလမ်း မကျဘူးဆိုတာကို ကျွန်တော် သိပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတော် အစိုးရက လုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်မို့ ကျွန်တော်တို့လည်း ဘာမှ စောဒက မတက်တော့ဘဲ စစ်တွေကို ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။
စစ်တွေကနေပြီး လေလံကို ဘယ်သူ ရသွားသလဲဆိုတာကို အကြောင်းကြားမယ့် ရက်ကို ကျွန်တော်တို့ စောင့်မျှော် နေခဲ့ကြပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရဆီက နှစ်လကျော် လာသည့်တိုင်အောင် ဘာအကြောင်း ပြန်ကြားချက်ကိုမှ ကျွန်တော်တို့ မရရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုကျွန်တော်တို့ သတင်း ကြားရတာက အဲဒီလေလံပစ်တဲ့ ဂိုဒေါင်တွေကို စတင်ဖြိုနေပြီလို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သွားကြည့်တော့လည်း စတင်ဖြိုနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လေလံပစ်တဲ့ ဂိုဒေါင်တွေကို ဘယ်သူတွေက ရသွားပြီ ဘယ်သူတွေက ဖြိုနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း တရားဝင် ဒီကနေ့ထိ အစိုးရက ကျေညာတာ မရှိပါဘူး။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ စုံစမ်းကြည်တဲ့အခါ စစ်တွေက ဆန်ကုန်သည် အသင်းက တလုံးရရှိပြီး ကျန်တာတွေကိုတော့ နအဖ စစ်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပူပေါင်းပြီး စီးပွားရေး လုပ်နေတဲ့ မူဆလင်ကုလား စီးပွားရေး သမားတွေက ရရှိသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခုလို မူဆလင်ကုလား စီးပွားရေး သမားတွေကို ပေးလိုက်တာဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွှေးကောက်ပွဲ အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်က မူဆလင်တွေကို စည်းရုံးလိုတဲ့ အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ စစ်တွေမှာ ပြောဆိုနေပေမယ့် ဒီကိစ္စဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ သက်ဆိုင်ကောင်း သက်ဆိ်ုင်နိုင်ပေမယ့် ရွှေးကောက်ပွဲနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ နအဖ စစ်အာဏာပိုင်တွေဟာ ခုလို မူဆလင် စီးပွားရေး သမားတွေကို အဲဒီဂိုဒေါင်တွေကို လေလံ ပေးလိုက်တာဟာ သူတို့ဆီက လာဒ်ငွေတွေ အများကြီး ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ဘဲ ကျွန်တော်ကတော့ ထင်မြင်ယူဆပါတယ်။ ခုလို မရဘူးဆိုရင် သူတို့အနေနဲ့ ခုလို ပေးစရာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတာက သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ ပေါ်လစီကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ချိုးဖေါက်တာပါဘဲ။ ခုလုပ်ရပ်ဟာ သူတို့ ချမှတ်ထားတဲ့ စီးပွားရေး ဦးတည်ချက် ၄ ရပ်မှာ ပါဝင်တဲ့ “ နိုင်ငံတော် စီးပွားရေး တစ်ရပ်လုံးကို ဖန်တီးနိင်မူ စွမ်းအားသည် နိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတို့၏ လက်ဝယ်တွင် ရှိရေး” ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်ကို အကြီးအကျယ် ချိုးဖေါက်တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တွေမြို့ အပါအ၀င် ရခိုင်ပြည်နယ်က ဘယ်မြို့တွေက လေလံကို ကြည့်ကြည့် တန်ဖိုး ရှိတယ်။ အသုံးဝင်တယ်။ လေလံဆွဲသူတွေ အမြတ်များများ ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်ရခိုင် စီးပွားရေး သမားမှ မရရှိခဲ့ကြပါဘူး။ စစ်တွေက တန် ၁၀၀ ကျတဲ့ ဆန်စက်ကြီးတွေ ကို လေလံပစ်တဲ့ အခါမှာ ဆိုရင်လည်း ဗမာပြည်က စီးပွားရေးသမားတွေကသာ ရရှိကြပြီး ဗွိုင်လာ အိုးကြီးတွေက အစ မိုးထားတဲ့ သံဖြူ အဆုံးခွာပြီး ရန်ကုန်ဘက်ကို ယူသွားကြပါတယ်။ စစ်တွေက ရေခဲစက်တွေ အပါအ၀င် တခြား စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်မယ့် လေလံတွေ ဆိုရင်လည်း စစ်အရာရှိတွေ အစုစပ်ပိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ဦးတေဇပိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကသာ ရရှိကြတာ များပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်စီးပွားရေးသမားတွေဟာ နအဖ စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေဆီမှာ နည်းအမျိုးစုံနဲ့ ခုလို ဖိနှိပ်ခံနေကြရပါတယ်။ အခုလည်း လေလံအတွက်ပိုက်ဆံ တသောင်းအပါအ၀င် ခရီးစရိတ်က အစ ငွေအမြောက်အမြားကုန်ကျခဲ့တဲ့ အပြင် Deposit အဖြစ်သွင်းထားတဲ့ ကျပ် သိန်း (၅၀) ကိုလည်း အခုအချိန်ထိ အစိုးရဆီက ပြန်လည် မရရှိသေးပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ နအဖ စစ်အာဏာရှင်တွေဆီမှာ မတရားသဖြင့် ဖိနှိပ်ခံနေရတာတွေကို ဖေါ်ပြပေးတဲ့အတွက်လည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, January 25, 2010 Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လွှတ်ပေးမယ်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦး မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ အာအက်အေက စုံစမ်းသိရပါတယ်။ မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းက ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦး မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ခံတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချူပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်ဦးတို့ကို အခုနှစ်ထဲမှာ ပြန်လည် လွှတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း မြို့ခံတဦးက အာအက်ဖ်အေကို ပြောပါတယ်၊၊
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ခံ။ ။'အဲဒီမှာ တွေ့ဆုံပွဲ လုပ်သွားတယ်။ လုပ်သွားတော့ သူက ကျနော်တို့ တပ်မတော်အစိုးရ ဟာတဲ့ ညစ်ပတ်တဲ့အစိုးရ မဟုတ်ဘူး၊ အာဏာကို မက်တဲ့ အစိုးရ မဟုတ်ပါဘူးပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုး သူက သြဝါဒ ပေးသွားတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးကိုယ်တိုင်။ အခုတဲ့ ဒီထဲမှာ အဲင်အယ်လ်ဒီက လူတွေလည်း ပါကောင်းပါမယ်၊ အဲင်အယ်လ်ဒီ ထောက်ခံတဲ့လူလည်း ပါကောင်းပါမယ်၊ နားထောင်သွားကြပါတဲ့။ အဲဒီတော့တဲ့ ကျနော်တို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးတင်ဦးကို၊ ဦးတင်ဦးကို အရင် လွှတ်ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းပဲ ကျနော်တို့ လွှတ်ပါမယ်ပေါ့။ သူပြောတဲ့ စကားလုံးထဲမှာ နိုဝင်ဘာလ လောက်မှာ လွှတ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး သူက ပြောသွားတယ်'။
ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးဟာ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ကို ဇန်နဝါရီလ ၂ဝ-၂၁ ရက်နေ့က လာရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့က မြို့မိမြို့ဖတွေ၊ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း၊ မိခင်နဲ့ ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းဝင်တွေ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ မြို့တော်ခန်းမမှာ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်၊၊ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချခံထားရတဲ့ ဦးတင်ဦးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မတိုင်ခင် အရင်လွှတ်ပေးမယ်လို့ ပြောခဲ့ပေမယ့် လွှတ်ပေးမယ့် လပိုင်း အတိအကျကိုတော့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့တာ မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်၊၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးမယ်လို့ ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ပြောဆိုသွားတဲ့ သတင်းကို ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့မှာ စိတ်ဝင်တစား ပြောဆိုမှုတွေ အတော်များတယ်လို့ စောစောက မြို့ခံက ပြောပါတယ်၊၊
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ခံ။ ။'ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ပြောသွားတယ်ဆိုတော့ အားလုံးက ဝမ်းသာအားရပေါ့။ ‘ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မယ်လို့ ပြောတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မယ်လို့ ပြောတယ်၊ ဦးတင်ဦးလည်း ပါတယ်လို့ပြောတယ်’။ အဲလိုမျိုးနဲ့ မြို့ကို ပြန့်သွားတာပေါ့လေ' ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ် အကျယ်ချုပ်အမှု စီရင်ရာမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့်နဲ့ ကန့်သတ်မိန့်တွေကို တရားရုံးမှာ ကိုယ်တိုင် လာရောက် ဖတ်ကြားခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရ အဆင့်မြင့်အရာရှိတဦး ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ ဖွဲ့...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (...
ကိုမေတ္တာတို့ အငြိမ့်အဖွဲ့ လာရောက်ဖျော်ဖြေခွင့်ရမည်...
နေအိမ်ပြင်ဆင်မှု တားမြစ်ခံထားရမှုအပေါ် လူထုခေါင်းဆောင...
ရခိုင်လူငယ် ကိုငွေစိုးလင်း အား အာဏပိုင်များက ထောင်...
နအဖ စွပ်စွဲချက်သည် သိက္ခာချလိုခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု မြန်...
ကိုညီညီအောင် (ခ)ကိုကျော်ဇောလွင် အားအာဏာပိုင်များက ...
မိုင်းလားအဖွဲ့ မှ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တဦး လုပ်ြက...
အာဏာရှင်ကို အဆုံးသတ်စေဖို့တာဝန် ဘယ်သူ့ ပခုံးပေါ် ...
ဇန်န၀ါရီလ ၂၇ ရက်မွေးနေ့ ရှင်နိုင်ငံကျော်စွယ်စုံအနု...
ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက ချစ်မြတ်နိုး လေးစားရတဲ့ ကိုဇ...
UNHCR နှင့် အမေရိကန်တို့ လက်အောက်က နို့ ဘိုး ဒုက္ခသ...
နအဖ စစ်အာဏာပိုင်များမှ ရခိုင်စီးပွားရေး သမားများအေ...
ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှု ဌာန (ရန်ကုန်) က ရုပ်သေးပြဇာတ် ကပြ...
ဇန်န၀ါရီလ စတုတ္ထပတ် တီဗွီမဂ္ဂဇင်း အစီအစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ် မဟာမုနိ ဘုရားကြီး သန့်ရှင်းရေးခေါ်ပြီ...
ဦးအောင်ဆန်းဦး သို့ အကြောင်းကြား(အိတ် ဖွင့် ပေးစ...
မြန်မာ ကလေးများအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံကနေခွင့်ထုတ်ပေး(...
နအဖ ကြောက်လိုက် ပုံများကတော့ ဂျပန်လာမည့် ကိုမေတ္တာတ...